Shooladaha Bioethanol: faa'iidooyinka iyo khasaaraha | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 19/04/2022 12:00 | Hoyga Cagaaran
Fikrad ahaan, ereyga guri wuxuu u taagan yahay goobta diiran ee qoyska, meesha aan ku dareemo raaxo iyo hoy. Ku rakibida meesha dabka lagu shido, ama alwaax ama bioethanol, waxay na siinaysaa diirimaad iyo diirimaad, taas oo noo ogolaanaysa inaan yeelano meel nasasho iyo xasillooni leh. Dhaqan ahaan, meelaha dabka lagu shido waxa ay ahaan jireen kuwo alwaax ah oo gubanaya, in uu mid yeeshona waxa uu leeyahay faa'iido iyo khasaare. Waxay door bidaan kulaylka ay bixiyaan, si kastaba ha ahaatee khasaaraha ugu weyn ayaa ah in qoryaha gubanaya ay u muuqdaan inay soo saaraan qiiq iyo dambas, taas oo keeni karta ur xun iyo raaxo la'aan guriga. The shooladaha bioethanol Waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo khasaare kala duwan oo ay tahay in la tixgeliyo.
Sababtan awgeed, waxaan dooneynaa inaan u hibeyno maqaalkan si aan kuu sheegno waxa ugu muhiimsan ee faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka shooladaha bioethanol ay yihiin.
1 Maxay yihiin
2 Foornooyinka bioethanol
3 Shooladaha bioethanol miyay kululaadaan?
4 Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka shooladaha bioethanol
5 Ma nabad qabaan?
Kuwani waa shooladaha isticmaala bioethanol ama ethanol sida shidaalka. Waxaa loo arkaa wax soo saarka deegaanka sababtoo ah gubashadiisu ma wasakhayso deegaanka sida shidaalka fosil. Waxaa lagu helay by qalabka processing of Ilaha la cusboonaysiin karo, sida galleyda, sonkorta sonkorta, hadhuudhka, baradhada iyo sarreenka.
Xaqiiqdu waxay tahay in marka la barbardhigo noocyada kale ee shidaalka caadiga ah, weli ma jiraan daraasado muujinaya faa'iidada tamarta, maaddaama hababka wax soo saarka bioethanol ee hadda jira ay u baahan yihiin tamar badan oo ka yimaada shidaalka fosil marka la barbardhigo tamarta laga helo shidaalka la soo saaro.
Uma baahna wax qalab ah si loo daadgureeyo uumiga saliidda, markaa waxa lagu dhejin karaa mid kasta qol ka badan 25 mitir cubic, sidaas darteed hubinta hawo-siin caadi ah. Guri kasta wuxuu u baahan yahay hawo joogto ah maalin kasta, 10 daqiiqo oo hawo cusub ah maalintii ayaa ku filan.
Hawlgalkeedu waa mid fudud. Kaliya ku dar shidaalka ilaa calaamadda uu tilmaamay soo saaraha. Gubida waa in gabi ahaanba la xidho oo la qaboojiyaa, iyada oo laga taxadarayo in aanu daadin weelka ama aanu daadin bioethanol. Waxaad ku samayn kartaa maro oo ku nadiifi maro si aad uga fogaato inay daadato. Si aad u shido meesha dabka lagu shido, kaliya u dhawaaji shidalka ama si taxadir leh u shid, maadaama yari ay caadi yihiin.
Dhibaatada wasakhowga deegaanka ayaa naga dhigaysa inaan raadino shidaal aan waxyeello u geysan kuleylkayaga. Sanadihii la soo dhaafay bioethanol wuxuu noqday shidaal caan ah guryaha. Sidaa darteed, way adag tahay in la doorto kuwa ugu fiican ee shooladaha bioethanol, marka la eego moodooyinkooda badan ee suuqa.
Markaad rabto inaad iibsato shooladda bioethanol waa inaad eegtaa dhowr cabbir kuwaas oo go'aamin doona tayada alaabta. Ka hore waa isticmaalka. Ujeedada guud ee iibsigu waa waxay leeyihiin kuleyl dhaqaale laakiin aan lumin tayada. Qiimaha shooladda ama meesha dabka lagu shido waa shay muhiim ah in la tixgeliyo. Isticmaalka bioethanol wuxuu ku xiran yahay xajmiga shooladda, tirada gubayaasha iyo furitaanka ololka.
Halbeeg kale oo ay tahay inaan ku xisaabtano waa awooda. Inta badan ee dabka uu leeyahay, isticmaalka badan ee qalabka ayaa yeelan doona. Way fiican tahay in la helo dheelitirnaan wanaagsan oo u dhexeeya awoodda iyo isticmaalka.
Ugu dambeyntii, qayb muhiim ah oo macluumaad ah waa cabbirka. Badeecada weyn ee su'aashu waxay tahay, wax badan ayaad cuni doontaa. Tani waxay naga dhigeysaa inaan ka guurno xiriirka ka dhexeeya awoodda iyo isticmaalka. Sidaa darteed, waa inaad doorataa shoolad ku habboon cabbirka qolka aan rabno inaan kuleyno.
Shooladaha bioethanol miyay kululaadaan?
Meelaha dabka lagu shido ee Bioethanol ayaa bixiya nooca kulaylka iyada oo la isu keeno. Tani kaliya ma awoodo inay kululeyso qolka aan ku jirno, laakiin sidoo kale waxaa lagu hagaajin karaa qolal kale. Inta badan looma isticmaalo kuleyliyaha ugu weyn.
Waxa loo qaabeeyey in la geliyo qolalka aanu wakhtiga ugu badan ku qaadano. Iyadoo ku xiran awooddooda iyo cabbirkooda waxay kuleyli doonaan wax ka badan ama ka yar. Awoodda caadiga ah ee goobaha biofire-ka waa 2 KW. Awooddan waxaan ku kululayn karnaa qol qiyaastii ah 20 mitir oo laba jibbaaran. Sidan oo kale, iyadoo ku xiran xajmiga qolkayaga, waxaan ogaan karnaa awoodda lagu iibsanayo.
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka shooladaha bioethanol
Isticmaalka aaladahaan waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido darrooyinkooda.
Kuwani waa faa'iidooyinkooda:
Waxay yihiin deegaan oo ay fududahay in la rakibo.
Uma baahna kuwa soo saara ama tuubooyinka hawo-qaadista.
Heer kuleylkooda si degdeg ah ayaa loo gaaray.
Naqshad dheeri ah ayay u keenaan guriga.
Waa badbaado waana fududahay in la joojiyo.
Qiimaha waa mid la awoodi karo.
Waxay leeyihiin dayactir yar.
Waxyeelooyinkiisa waxa ka mid ah:
Bioethanol waa xoogaa ka qaalisan.
Inkasta oo aanay iska dayn qiiq ama dambas, haddana waxay soo saartaa ur muuqda.
Awoodda kuleylka ayaa aad u xaddidan. Heer ogsijiin ku filan waa in uu jiraa si looga fogaado uruurinta CO2 sare.
Masaafada ugu yar ee ay tahay inaad ka haysato alaabta guriga waa hal mitir.
Marka la eego arrinta dabka iyo kuleylka, su'aashu waxay mar walba soo baxdaa haddii ay ammaan yihiin. shooladaha bioethanol aad bay ammaan u yihiin, tan iyo markii ay demi waa mid aad u fudud. Intaa waxaa dheer, moodooyin badan ayaa leh qaar ka mid ah difaacayaasha ololka kuwaas oo naga caawinaya in aan si lama filaan ah u gubno.
Heerkeeda khatarta ah aad ayey uga yar tahay xaabada dhaqanka, maadaama aysan jirin dhimbilo ama qoryo gubanaya. Si kariyaha bioethanol-kayaga uu gebi ahaanba ammaan u ahaado, waa inaan ixtiraamnaa masaafada badbaadada ee hal mitir.
Bioethanol waa in la buuxiyaa sida loo isticmaalo. Waxaa jira noocyo iyo noocyo kala duwan oo bioethanol ah. Sida laga soo xigtay tayada sare ee ay leedahay, awoodda kuleylka badan waxay yeelan doontaa, marka lagu daro sii daynta ur yar.
Isticmaalka bioethanol wuxuu si buuxda ugu xiran yahay awoodda goobta dabka iyo wakhtiga iftiinka. Shiino kastaa waxa uu leeyahay taangiyada taangiyada qaarkood. Iyada oo ku xidhan waxa ay ku hoyan karto, gubashadu waxa ay sii jiri doontaa wax ka badan ama ka yar.
Mid ka mid ah arrimaha la tixgelinayo marka la isticmaalayo bioethanol waa xoojinta ololka iyo daloolka ka baxa. Caadiyan gubasho inta u dhaxaysa 0,20 iyo 0,60 litir oo bioethanol saacaddii. Waxa la odhan karaa kani waa isticmaalka caadiga ah, markaa litirkii shidaalku waxa aanu ku haysan karnaa ololka oo u dhexeeya 2 ilaa 5 saacadood.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka shooladaha bioethanol.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Kaydinta tamarta » Hoyga Cagaaran » Foornooyinka bioethanol